Ungawunciphisa kanjani umthelela we-coronavirus enkampanini | Izindaba zamagajethi
Ungawunciphisa kanjani umthelela we-coronavirus enkampanini
U-Ignacio Sala | | Aplicaciones, Izifundiswa
I-coronavirus ikhubaze cishe lonke iYurophu, iChina namanye amazwe emhlabeni wonke izinyanga ezimbili. Yonke imisebenzi yezentengiselwano iye yama ubusuku bonke. Njengoba izigaba ezahlukahlukene zehlulwa ukubuyela kokujwayelekile, amabhizinisi avula iminyango yawo.
Ngokuya ngohlobo lwebhizinisi, kufanele silandele uchungechunge lwemikhawulo efana nokuphambana nomphakathi, ukusetshenziswa kwamamaski, amandla alinganiselwe ... bangaba yisipikili ebhokisini lomngcwabo kosomabhizinisi abaningi nabasebenza ngokuzimela ngemuva kokuhlala izinyanga ezimbili bengasebenzi
Baningi osomabhizinisi nabasebenza ngokuzimela abazama ukuthola izindlela abazokwazi ukuzenza gcina ibhizinisi livulekile, uzama ukulahlekelwa yimali encane ngangokunokwenzeka noma okungenani amboze izindleko kuze kube isimo siyathuthuka ezinyangeni ezizayo. Uma ufuna ukwazi ezinye izindlela ezingakusiza unqobe inkinga ebangelwe yi-coronavirus, ngiyakumema ukuthi uqhubeke nokufunda, ngoba nakanjani, uzothola imibono eminingi ebingakangeni engqondweni yakho.
Ungase ucabange ukuthi le yindatshana eyodwa kunaleyo ongayithola kwi-intanethi yalolu hlobo, kodwa into yokuqala okufanele uyazi ukuthi nami ngingusomabhizinisi, ngakho-ke, ngazi kahle ukuthi yiziphi izinkinga ezisithintayo manje nalabo ukuthi sinakho okufanele sizame funa isisombululo ngokushesha okukhulu.
1 Izicelo zokuphatha eziphelele
2 Xoxa nabahlinzeki bethu
3 Sebenza kusuka ekhaya
3.1 Hlela umsebenzi
3.2 Imihlangano engokoqobo
3.3 Ukuxhumeka kwesilawuli kude
4 Dala isitolo esiku-inthanethi
Izicelo zokuphatha eziphelele
Ukubonisana ngentela nezabasebenzi kusivumela ukuphatha amaholo, ama-invoyisi, izintela, ukubalwa kwezimali ... ngendlela elula kakhulu futhi ngaphandle kokukhathazeka. Kepha, ngokuya ngenani lenkampani yethu kanye nenani labasebenzi, kungenzeka ukuthi inyanga ngayinye, i-invoyisi yomeluleki wethu kungenye yezindleko esingeke sikwazi ukuzikhokhela.
Ngaphambi kwalesi simo isincomo sethu sithi: phatha inkampani yakho efwini. Kuyinqubo eqhubeka ngokulula futhi eyonga, ngoba sinenani elikhulu lezinsizakalo eligxile endaweni eyodwa futhi ngentengo ephansi kakhulu lapho umeluleki ozinikele angamela khona.
Xoxa nabahlinzeki bethu
Ziningi izinkampani nabasebenza ngokuzimela abazama ukubuyisa okujwayelekile isihlobo ngemuva kokudlula kwe-coronavirus. Enye yezinto ezibaluleke kakhulu enkampanini ihlobene nezinkokhelo. Ngaphambi kokucabanga ngokunciphisa izindleko, ezingasilimaza ngokuhamba kwesikhathi, kufanele sihlale phansi inkhulumomphendvulwano nabahlinzeki bethu.
Ngokuya ngesimo sezomnotho lapho i-coronavirus ishiye khona umphakeli wethu, cishe bazokwamukela ukubambezela ukuqoqwa kwama-invoyisi asalindile. Khumbula ukuthi noma iyiphi inkampani noma umuntu ozisebenzayo ukhetha ukukhokhisa, noma ngabe kuhlwe kakhulu, kunokungakhokhisi.
Ngokusobala, ngaphambi kokuhlala phansi ukuzama ukunweba izinkokhelo, kufanele sinake i inzuzo yomhlinzeki wethunjengoba kungenzeka ukuthi akuwona kuphela amakhasimende acela ukuhlehliswa.
Sebenza kusuka ekhaya
Iningi lomsebenzi wasehhovisi ongenzilwa umphakathi, kungenziwa ngokuphelele kusuka ekhaya, inqobo nje uma kutholakala isiyalo somsebenzi okumele abasebenzi nabasebenzi bathobele.
Ukusebenza ekhaya, akuvumeli kuphela ukunciphisa isikhala samahhovisi, okuvumela usomabhizinisi ukuthi afune amahhovisi amancane futhi ngaleyo ndlela unciphise inani lentela yanyanga zonke. Iphinde ivumele umqashi ukuthi alondoloze imali kwizibonelelo noma kumamayela uma kudingeka.
Izicelo zokuhlangabezana nezidingo zanoma iyiphi inkampani ukuze abasebenzi bayo basebenze kude, kunezinhlobo zonke zezicelo ezithi ikuvumela ukuthi usebenze ukude ngaphandle kokushoda.
Uhlelo Lokusebenza LwamaMicrosoft lwenzelwe ukuvumela izinkampani ukuthi zisebenze kude, noma ngabe isungula isiteshi sokuxhumana esijwayelekile futhi esizimele nomunye wabasebenzisi.
Amaqembu eMicrosoft, ahlanganisa a ipulatifomu yokushaya ividiyo Lokho kusivumela ukuthi sibambe imihlangano ebonakalayo ngaphandle kokuzithola sesisetha isikhala ehhovisi ukuze sikwazi ukuyibamba, noma ngabe kwenzeka ngezikhathi ezithile noma kucacisiwe.
Usebenza ngokubambisana neTo-Do, i-task application ye-Microsoft, okuyi isivumela ukuhlela umsebenzi kulindwe isisebenzi ngasinye futhi sihlole isimo sazo. Ihlangana neHhovisi 365, ivumela abantu abaningana ukuthi basebenze ndawonye kudokhumenti efanayo.
Noma kunjalo I-Slack enye indlela enhle kakhuluNjengoba inganikeli izingcingo zevidiyo nokuhlanganiswa nomphathi womsebenzi, ayikwenzi uhlelo lokusebenza olunconywayo, ngoba ngangokunokwenzeka imayelana nokuqoqa yonke imisebenzi engenzeka kuhlelo olufanayo.
Uma kukhulunywa ngokwenza izingcingo zevidiyo, inani lezinketho ezivumelekile libanzi kakhulu. Uma sikhethe ukusebenzisa Amaqembu e-Microsoft, singenza amakholi evidiyo ngohlelo olufanayo, kanjalo asikho isidingo sokusebenzisa ezinye izinsizakalo.
Uma lokhu kungenjalo, izinketho ezinikezwa yi-Google Meet ne-Zoom kungukuthuthuka kuzo zombili izinombolo zezinsizakalo kanye nenani labahlanganyeli (i-100 kukholi efanayo yevidiyo). Zombili izinhlelo zokusebenza, njengamaqembu e-Microsoft, ziyatholakala kumadivayisi eselula.
Ukuxhumeka kwesilawuli kude
Uma sisebenzisa i- Uhlelo lokuphatha ebhizinisini lethu, into yokuqala okufanele siyenze ukubuza unjiniyela ukuthi ngabe uhlelo lokusebenza linikeza ithuba lokufinyelela kude, ukuze ngekhompyutha eyodwa, bonke abasebenzi baqhubeke nokusebenza njengakuqala.
Uma lokhu kungenjalo, singasebenzisa izinhlelo zokulawula kude, izinhlelo zokusebenza lezo sivumele ukuxhuma kusuka noma yikuphi futhi usebenzise yonke ikhompyutha, hhayi uhlelo lokuphatha kuphela olufakwe kukhompyutha. I-TeamViewer ingesinye sezixazululo eziphelele kakhulu ezitholakala emakethe, ngoba futhi isinikeza nezicelo zamadivayisi eselula.
Uma wake wacabanga ukudala isitolo esiku-inthanethi manje kungaba yisikhathi esikahle. Ku-intanethi singathola izinsizakalo ezahlukahlukene ezisivumela ukuthi senze iwebhusayithi, siphathe inkokhelo, izindlela zokuthumela ... Ngokuya ngebhizinisi lethu, kuzosivumela ukuthi sandise ababukeli esingabafinyelela.
Ngalo mqondo, uma ikhasi le-Facebook lenkampani yethu livame ukuba nomsebenzi omningi, singasebenzisa ipulatifomu entsha ye-Facebook ebizwa Izitolo ze-Facebook, ipulatifomu leyo isiza amabhizinisi amancane ukuthengisa imikhiqizo yawo nge-Facebook futhi lokho kwethulwe ngaphambi kwesikhathi obekuhlelwe yinkampani kaMark Zuckerberg ngenhloso yokusiza amabhizinisi amancane kulezi zikhathi ezingaqinisekile.
Ngokwale nkundla, dala isitolo esiku-inthanethi ngezitolo ze-Facebook kuyinqubo esheshayo futhi elula kakhulu Ngokusebenzisa amathempulethi namathuluzi ahlukahlukene abawanikeza thina, ngakho-ke uma sinesithombe sayo yonke imikhiqizo yethu, singaba nesitolo sethu esikhona ngemizuzu embalwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Aplicaciones » Ungawunciphisa kanjani umthelela we-coronavirus enkampanini
IHuawei Y6P: Sihlaziya "izindleko eziphansi" zakamuva ezivela kwaHuawei
I-Yeedi 2 Hybrid, ukuhlaziywa okujulile kwalesi sihlanzisi se-smart vacuum vacuum